Izindatshana zikaFahad Fareed zivuliwe Martech Zone |
Imibhalo nge UFahad Fareed
U-Fahad Fareed uyiMenenja Yokumaketha Komkhiqizo kwa Isitebhisi sedatha – inkampani ehamba phambili yokulungiswa kwebhizinisi nekhwalithi yedatha yesoftware. Esebenzisa ulwazi lwakhe embonini ye-ETL nekhwalithi yedatha, u-Fahad ubhala imininingwane yakamuva namathiphu onjiniyela nabaphathi be-C-suite ukuze abasize benze izinqumo ezingcono zokusondela ezinhlelweni zokuphatha idatha.
Ukumiswa Kwekheli 101: Izinzuzo, Izindlela, Namathiphu
ULwesihlanu, February 11, 2022 ULwesihlanu, February 11, 2022 UFahad Fareed
Ugcine nini ukuthola wonke amakheli ohlwini lwakho alandela ifomethi efanayo futhi ayengenaphutha? Ungalokothi, akunjalo? Naphezu kwazo zonke izinyathelo inkampani yakho engase izithathe ukuze inciphise amaphutha edatha, ukubhekana nezinkinga zekhwalithi yedatha - njengokungapelwa kahle, izinkambu ezingekho, noma izikhala ezihamba phambili - ngenxa yokufakwa kwedatha mathupha - akunakugwenywa. Eqinisweni, uSolwazi uRaymond R. Panko ephepheni lakhe elishicilelwe wagqamisa ukuthi amaphutha edatha yesipredishithi ikakhulukazi kumadathasethi amancane